Gudoomiyaha Maxkada Sare Jamhuuriyada Somaliland oo Soo Bandhigay Kiisaska Ay Ka Garnaqeen Maxkamadaha Dalku Sanadkii 2020. |
Gudoomiyaha Maxkada Sare Jamhuuriyada Somaliland oo Soo Bandhigay Kiisaska Ay Ka Garnaqeen Maxkamadaha Dalku Sanadkii 2020.
WAXQABADKII MAXKAMADAHA DALKA SANNADKII 2020
Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ahna guddoomiyaha guddida cadaaladda jamhuuriyadda Somaliland, garyaqaan Aadam Xaaji Cali Axmed, ayaa maanta ka warbixiyay waxqabad-sannadeedkii maxkamadaha dalka u qabsoomay sannadkii dhamaaday ee 2020-ka.
Guddoomiyuhu waxa uu ugu horayn ka warbixiyay tirada dacwadaha soo galay maxkamadaha kala duwan ee wadanka, waxaanu sheegay in sannadkii 2020-ka ay maxkamadaha dalka, soo galeen 23, 810 dacwadood, oo iskugu jira madani, ciqaab iyo fullin. Dacwadaha madaniga ah ayaa tiradoodu dhamayd 12,879 dacwadood, sidoo kale dacwadaha ciqaabta ah ayaa tiradoodu dhamayd 8,816 dacwadood, halka tirada dacwadaha fullinta ah ee maxkamaduhu fuliyeen ahayd 2,115 dacwadood.
Guddoomiyuhu waxa uu sheegay in isku geynta dacwadaha madaniga iyo ciqaabta ah ee sannadkii hore ay maxkamadaha wadanku ka garnaqeen dhamaayeen 19,066 dacwadood, taasi oo la micno ah in 87% la dhameeyay, halka 13% ay wali socdaan.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in sannadka 2020 ay sare u kaceen dacwadaha soo galay maxkamadaha kala duwan ee dalku, mar uu ka hadlayay arrintaasina waxa uu yidhi “ Sannadkii hore ee 2019-ka markaynu u eegno sannadka 2020-ka, dacwaduhu way kordheen, oo dacwaduhu waxay noqdeen 23, 810 dacwadood, halkay 2019-kii ka ahaayeen 18, 456 dacwadood. Sannad walba dacwaduhu way kordhaan. Sababtu wax kale maaha, kalsoonida dadku ay ku qabaan hay’adda garsoorka ayaa sannad walba sare u sii kacday, kalsooni xooga ayay ku qabaan dadku, bulshadu imika 90% in ku dhaw garsoorkay yimaadaan, nidaamadii kale ee dhaqanka ama dadbanaa halkan bay ka door bideen, dacwadihii way deg-degayaan, dhakhsaa loo kala saarayaa, fullintii baa fudud, markaa arrintaasi waa arrin aad loogu farxo.”
Geesta kale waxa uu guddoomiyuhu ka warbixiyay waxqabaddada kale ee maxkamadaha dalka u qabsoomay, waxaanu sheegay in sannadka 2020-ka dhisme kordhin iyo dayactir lagu sameeyay xarumaha maxkamadaha gobolka Sanaag, Daadmadheedh, Gabilay iyo xarunta maxkamadda sare, halka dhismaha maxkamadda racfaanka gobolka Maroodi-jeexna ay marayso meel gebo-gebo ah. Mar uu guddoomiyuhu ka hadlayay kobcinta aqooneed ee garsoorayaasha, kaaliyayaasha, gaadhsiiyayaasha iyo hawl-wadeenada kale ee maxkamadaha dalka, waxa uu xusay in sannadka 2020-ka, 83 arday oo iskugu jira degree iyo master loo fidiyay deeq-waxbarasho, taasi oo ay iska kaashadeen hay’adda garsoorka iyo jaamacadaha wadanka. Halka 13 tababar oo la qabtayna ay ka faa’iidaysteen 200 oo ka mid ah garsoorayaasha, kaaliyayaasha, gaadhsiiyayaasha iyo hawl-wadeenada kale ee garsoorka.
Waxa uu sidoo kale guddoomiyuhu tilmaamay in ay dardar galiyeen sannadka 2020-ka maxkamadaha guur-guura, waxanna uu sheegay in garsoorayaasha maxkamadda sare bil walba u baxayeen gobolada Somaliland, bari iyo galbeedba iyadoo bishii 12-aadna ay u guureen gobolada bari ee dalka.
Guddoomiyuhu waxa uu sidoo kale bulshada, culimada iyo duubabka dhaqanka ugu baaqay in ay dacwadaha gali kara suluxa ku dhameeyaan isku tanaasul, sida arrimaha daynta iyo dhaxalka, halka uu xusay in marwalba garsoorka dalku diyaar u yahay ka garnaqista dacwadaha, diyaarna ula yihiin bulshada garnaq cadaalad ah.
Waxa uu sidoo kale guddoomiyuhu ka waramay, caqabadaha ku xeeran garsoorka, sida agabka iyo kaabayaasha, sidoo kale,waxa uu ka waramay duruufaha ay ku shaqeeyaan hawl-wadeenada maxkamaduhu iyadoo gaadhsiisan heer ay xitaa naftooda ku waayaan, isagoo tusaale u soo qaatay labadii garsoore ee la dilay iyagoo hawlan waajibaadkooga shaqo.
Waxa kale oo uu guddoomiye Aadam sheegay in guulo waaweyn laga gaadhay xoojinta xidhiidhka is-kaashi ee ay Somaliland la leedahay wadamada caalamka, isagoo xusay in hay’adda garsoorku tababaro iyo aqoon-korodhsi u dirtay garsoorayaasha maxkamadaha dalka, wadamada saaxiibka dhaw la ah Somaliland, haddii ay noqoto dalalka Afrika iyo caalamka kale.
Guddoomiyaha maxkamadda sare waxa uu baaq u diray, bulshada qaybaheeda kala duwan, hay’addaha dawliga ah iyo waalidka, sidii looga hortagi lahaa arrinta ku aadan dambiyada ay galaan dhallinyarada, iyadoo loo raadinayo xal aan ahayn xabsiyada.
Ugu danbayn waxa uu guddoomiyuhu uga mahad-celiyay madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) doorka muuqda ee ay ka qaataan socodsiinta baahiyaha hay’adda garsoorka, waxa uu sidoo kale guddoomiyuhu u mahadnaqay dhammaan guddoomiyayaasha, garsoorayaasha iyo hawl-wadeenada kale ee maxkamadaha, waxaanu ku amaanay hawsha wanaagsan ee ay bulshadooda u hayaan, isagoo ku tilmaamay naftood hurayaal u heelan horumarinta qarankooda. Sidoo kale waxa uu guddoomiyuhu u mahadnaqay golayaasha qaranka ee wakiillada iyo guurtida, Booliiska, Asluubta, ururada qareenada, komishanka xuquuqul insaanka, guddida shuruucda, ururada bulshada, warbaahinta iyo dhammaan hay’addaha dawliga ah iyo kuwa gaarka ah ee ay wadashaqaynta wanaagsan leeyihiin hay’adda garsoorka jamhuuriyadda Somaliland.